Ufumana uthuthuzelo ngokomphefumlo umfundi waseWSU obengusozigidi | Ilisolezwe
Ufumana uthuthuzelo ngokomphefumlo umfundi waseWSU obengusozigidi
Iindaba / 9 September 2017, 6:15pm / Sithandiwe Velaphi
USibongile Mani ngethuba lenkomfa noonondaba eMonti Umfanekiso: Siyanda Jantjies
IYunivesithi iWalter Sisulu (WSU) idize ukuba uSibongile Mani, umfundi obengundaba-mlonyeni kulandela ukudyarhaza imali kaNSFAS ephantse ifikelele kwisigidi seerandi, ufumana uthuthuzelo ngokomphefumlo.
UMani ubengundaba-mlonyeni kutshanje kulandela ukufakelwa izigidi ezilishumi elinesine (R14 million) kwikhadi lakhe lokuthenga ukutya (elilawulwa yi-IntelliMalli) endaweni ye-R1 400.
Ngenxa yoku, uMani - ngokokutsho kombutho wabafundi iPasma aphantsi kwawo – uphila phantsi koloyiko futhi ukwabhuqwa nangumvandedwa. Oku kudule ngethuba iPasma, iphelekwa nguMani, ibithetha noonondaba eMonti kwiveki ephelileyo apho abafundi baseWSU bebengabambeki befuna ingcaciso kuMani ngendlela nonobangela wokuchitha iR818 000.
Kwingxelo ekhutshwe yiWSU ngokuhlwa kwangoLwesihlanu, le yunivesithi ithe: “IYunivesithi iyaqhuba ngokunikeza ngenkonzo yothuthuzelo lomphefumlo kumfundi (Mani) ukuqinisekisa ukuba uyaqhuba nezifundo zakhe.”
Isithethi samapolisa aseMpuma Koloni uBrigadiya Marinda Mills ungqinile ukuba iziphathi-mandla ze-IntelliMalli zivule ityala lobusela ngakuMani kwaye kukhwetywe umcuphi onamava ukuphanda eli tyala.
Ngethuba ithetha noonondaba kwiveki ephelileyo, iPasma idize ukuba uMani wayibika kwiziphathi-mandla zaseWSU le nkuntyula yemali “kodwa akhonto yenziwayo, bavela bathula nje”.
Kodwa iWSU kwimbalelwano yayo ithi ifumanise ukuba akukho msebenzi wayo unegxeke kule mpazamo. Kwankqu neziphathi-mandla zeNSFAS zithi akukho gxeke ngakumagosa ayo. IYunivesithi iWSU ikwadize ukuba izakukhe inqumame ekuthetheni ngale nyewe de kuqosheliswe uphando.